Nzira yekuwana sei yakakwirira PR kunze kwemashure kuburikidza nekutsvakurudza kumashure?
Nyaya ino yakagadzirirwa kumusoro wekutsvaga maitiro ako emakwikwi emakwikwi emakambani uye kuti tsvakurudzo iyi inogona sei kusimudzira nzvimbo yako nzvimbo paSERP. Pane chirevo chimwe chinotsanangura zvakakwana kukwikwidzana pamusika wejedi - "Chengeta shamwari dzako pedyo uye vavengi vako vari pedyo. "
Kubudirira kwekugadzirisa maitiro, kunyanya kunotungamirirwa nenyanzvi SEO nyanzvi inotanga nekukwikwidzana backlink tsvakurudzo uye misika yekutsvaga niche. Tsvakurudzo ye niche competitor backlinks inobvumira iwe kuti unyore zvakananga iwe webhutori wako webhu uye unowana kukosha kwebhizimusi rako rezvemabhizinesi backlink mikana inogona kushandiswa kubuda kunze kwako.
Backlinks inoramba iine chinangwa chekushandura webhusaiti nekuita kuti iwedzere kuoma. A webhusaiti inofanira kuwana huwandu hwehutano hwehuyo pachayo kuti hugadzire huwandu hwehupenyu hwehupenyu.
Kwemakore gumi apfuura, kubatanidza chivako chachinja zvikuru uye chakawana zvakaoma zvikuru. Usatenda kune avo "nyanzvi" dzinoti chivakidzani chekubatanidza chinhu chakarasika unyanzvi. Inoramba iine chikamu chinokosha chekushandura webhusaiti uye ichiri kuunza kukosha kuIndaneti mabhizimisi ekusimudzira. Chinhu choga ndechekuti kusimbiswa kwekuvaka chivako kwakashandurwa. Mazuva ano, simba rezviwanikwa zvinoreva nzvimbo yako ndiyo nhamba imwe yenzira ye backlinks hutano.
Muchikamu chino, tichakuratidza maitiro ekutungamira nekukwikwidza backlink kuongorora uye kuti ungaziva sei kuti webhu yako inogona kuwanika zvakanakisa juisi yeji yega.
Gadzira simba rako rechiremera
Kuziva kukwikwidza kwako, unogona kutungamirira Google tsvakurudzo yebasa rinopiwa nebhizimisi rako. Tsvaga mhinduro dze TOP10 nemumwe wepamusoro-soro kutsvaga mazwi uye uzviise muchiparidziro. Urongwa uhwu huchanyatsomiririra nharo yako yeN TOP niche. Uyezve, unogona kutarisa kuGoogle kutsva-inobatanidza: "domain yako" mubvunzo. Google ichakupawo urongwa hwemasayithi ane chokuita neiche.
Zvisinei, iwe unogona kutora tsvakurudzo ye backlink kunyanya kushandisa Semalt Web Analyzer. Ichakupa tsanangudzo yakananga yedunhu rekukwikwidzana, kuratidza mazita avo, kutendeuka uye mamwe makuru anoverengeka dheta ayo achakubatsira iwe kuti unzwisise kuti ungapfuurira sei mukwikwidzi wako. Uyezve, unogona kutarisana nekukwikwidza pamapeji ewebhu, pamwe ne "gap content" pakati pavo nemakwikwi.
Zvinonzwisisika kutarisa mumwe wevatungamiri venyu TOP5 kuti vaone kana vakanyatsogadzirisa niche yako uye vashande pamwero wako.
Kushandisa zvigadzirwa zvekuongorora, iwe unogonawo kugadzira vhizimisi vhiki rekutevera backlink zviyeuchidzo izvo zvicharondedzera pane zvese zvitsva zvekunze zvakapiwa kubva muIndaneti inokwikwidzana.
Unofanirwa kuronga kuburikidza neumwe neumwe wekwikwidzikiti yako URL dzekukwikwidza kuti uwane mikana ye backlink kubva pane zvakasikwa, domains dzinosangana kakawanda kune imwe nzvimbo, dzichibatanidza hukama pakati pemakwikwi ako uye akafa Source .